६५ वर्षीया मनकुमारी भन्छिन्– आत्मबल दह्रो बनाए कोरोनालाई सजिलै जितिँदोरहेछ - Sanchar Post
६५ वर्षीया मनकुमारी भन्छिन्– आत्मबल दह्रो बनाए कोरोनालाई सजिलै जितिँदोरहेछ
६५ वर्षीया मनकुमारी पौडेललाई दमको समस्या छ । उमेर र रोगका कारण उनलाई कोरोनाले बढी नै समस्यामा पार्न सक्ने आकलन परिवारका सदस्य, आफन्त र शुभेच्छुकले गरेका थिए । १५–१६ वर्षदेखि दम र प्रेसरको बिरामी भएकाले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीसमेत झस्किएका थिए ।
तर, २० चैतमा अस्पताल भर्ना भएकी पौडेल १७ दिनमै कोरोनालाई जितेर घर फर्किएकी छिन् । पौडेलको आत्मबल देखेर सबै खुसीसँगै आश्चर्यमा परेका छन् । कोरोनालाई जित्ने उनको आत्मलब कति थियो भन्ने उनकै भनाइबाट थाहा हुन्छ ।
‘रोग लागे पनि सबैभन्दा बलियो आत्मबल बनाउनुपर्ने रहेछ,’ पौडेलले भनिन्, ‘अस्पतालमा बस्दा पनि डाक्टर, नर्स सबैको माया पाएँ, म अस्पताल छुजस्तो कुनै महसुस भएन, परिवारमै बसेजस्तो भयो । त्यसले गर्दा म कोरोनालाई सहजै जितेर घर फर्केकी छु ।’
विभिन्न देशमा कोरोना लागेर दैनिक मान्छे मरिरहेको एफएम रेडियो, परिवार र आफन्तबाट जानकारी हुँदा मनमा केही डर उत्पन्न भए पनि मर्छु भन्ने कहिल्यै नलागेको बताइन् । ‘मलाई केही हुँदैनजस्तो लागेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई जितेरै छोड्छु भन्ने सोच आउँथ्यो ।’
आइसोलेसनमा उपचारका क्रममा केही दिन बसेपछि प्रेसर हल्का बढेपछि औषधि चलाइएको थियो । प्रेसरको औषधि खाएसँगै अहिले सहज भएको उनी बताउँछिन् । उनले खानपानमा ख्याल गर्न र तातोपानीमा जोड दिन पनि भनेकी छिन् । ‘यो वेला पोषिलो खाने र आत्मबल बढाउने वेला रहेछ । यदि कोरोना लागेको छ भने मन बलियो बनाउनुस्, खानपानमा ख्याल गर्नुस्, तातोपानी अलि बढी पिउनुस्,’ पौडेलले भनिन् ।
आइसोलेसनमा रहँदा दैनिक बिहान, बेलुका दूध पिउने, नियमित खाना, खाजा खाने गरेको उनले बताइन् । खाना, खाजाको व्यवस्था धौलागिरि अस्पतालले निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । नर्सले नियमित खाना, खाजा ल्याउने र स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिने गरेको उनले बताइन् । डाक्टरहरू वेलावेलामा आउने, धेरैजसो फोनबाटै जानकारी लिने गरेको उनले बताइन् । ‘मलाई अस्पतालमा सबैले धेरै माया गर्नुभयो । मेरो ख्याल गर्ने सबैमा धेरै–धेरै धन्यवाद । मेरा लागि डाक्टरसाब भगवान् बनेर सेवा गर्नुभयो,’ उनले भनिन् ।
पौडेललाई घर पुगेपछि पनि केही दिन क्यारेन्टाइनमा राखिने बताइएको छ । छोरा चिरञ्जीवी पौडेलका अनुसार उनलाई छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । ‘आमा एउटा युद्ध जितेर आउनुभएको छ । उहाँ एक साहसी व्यक्ति हो,’ चिरञ्जीवीले भने, ‘रोगलाई जित्न बेल्जियमबाट भागी–भागी यहाँ आउनुभयो । आखिर जित्न सफल पनि हुनुभयो ।’
पौडेललाई निको पारेर अस्पतालबाट घर पठाएसँगै धौलागिरि अञ्चल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक उत्साहित देखिएका छन् । कोरोनाको चौतर्फी सन्त्रास र भय बढिरहेका वेला जिल्लामा कोरोना संक्रमित देखिना साथ अस्पतालमा ल्याउन र उपचार गर्न कठिन मानेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमा मनोबल बढेको छ ।
‘निकै जोखिम मोलेर उपचार सेवामा खटिएका थियौँ, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी वृद्धा आमा निको भएको सूचनापछि कार्यक्षेत्रमा थप उत्साहित बनेर लागेका छन्,’ धौलागिरि अञ्चल अस्पतालका प्रमुख डा. शैलेन्द्र पोखरेलले भने, ‘यो एउटा ऐतिहासिक सफलता हो । हामीमा थप उत्साह र उमंग प्रकट भएको छ ।’ सुरक्षित सामग्री, पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति अभावका कारणले सुरुमा उपचारमा केही समस्या भए पनि अहिले भेन्टिलेटरदेखि आइसियूको कामसमेत अघि बढेकाले अब कोरोना संक्रमितको उपचारमा कुनै समस्या नहुने डा. पोखरेलले बताए ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ४३ हजार ५ सय बढीको मृत्यु
तीन हजार पाँचसय ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान
मधेसी मोर्चाकै सहभागितामा वैशाख ३१ गते निर्वाचन हुन्छः पौडेल